site ha na 20-11-11
Ka anyị mụta banyere Tween 80 (nke a makwaara dị ka Tween 80 ma ọ bụ polysorbate 80) na Tween 20 (nke a makwaara dị ka Tween 20) na ụzọ atọ dị iche iche 1。 Nkọwa nke Tween 80 dabeere na polymerization nke desaturated sorbitol monooleate na ethylene oxide. Nkọwa nke Tween 20: ngwakọta nke polyethyl ...
Iji silicone arụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ na-emepụta ihe
Ruo ogologo oge, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ngwaahịa na-akpachara anya maka itinye ihe ndị na-emepụta siliki nke dị n'ime. Nke a nwere ike inwe ọtụtụ ihe na nghọta dị iche na ojiji nke ngwaahịa Enwere ọtụtụ nghọtahie banyere ndị ọrụ ntọhapụ na silica gel Otu. Maka mmetụta nke pri ...
Na 2025, a na-atụ anya ka uru ahịa carbomer zuru ụwa ọnụ ruo yuan 10.34
Ahịa ike nke Qingdao carbomer buru ibu. Achọpụtara na n'ime afọ ise na-esote, a ga-enwe ahịa yuan 10,34 ijeri ga-emepe na 2025. Ọzọ, ka anyị soro ihe ọhụrụ nke Qingdao yinuoxin Carbomer bụ homopolymer nke acrylic acid, crosslinking ma ọ bụ njikọta na ihe ọ bụla o ...
Gịnị bụ mmetụta anwansi nke carbomer?
Kapom juru ebe niile na ndụ anyị na-adị kwa ụbọchị, ị chọpụtala ya? Taa, anyị ga - amata maka USES nke kapom a dị ịtụnanya na Onye isi ala Hu na Inoxon New Materials. 1. Chebe akpụkpọ gị Kapok nwere mmetụta nchekwa na-emetụta ahụ mmadụ, ọ nwere mmekọrịta dị na anụ ahụ mmadụ, mkpụrụ ndụ ihe nketa ...
Nchịkọta usoro PEG, ị chọrọ ịma?
Peg-200: Enwere ike iji ya dị ka ọkara maka njikọta ahịhịa na onye na-ebu ọkụ yana ihe ndị ka elu. Enwere ike iji ya dị ka humectant, ihe mgbaze na-agbakwunye nnu inorganic na viscosity regulator na ụlọ ọrụ kemịkalụ kwa ụbọchị. Ejiri dị ka softener na antistatic gị n'ụlọnga na akwa ụlọ ọrụ; Ejiri dị ka wetting ag ...
Ghọta uru nke arụmọrụ polyethylene glycol, maka imepụta ezigbo ntọala!
Polyethylene glycol (PEG) bụ polima nke ethylene oxide na mmiri. Ọ bụ flaffin na-acha ọcha ma ọ bụ ntụ ntụ siri ike, na-enweghị isi ma ọ bụ nwee isi na-adịghị ike. Ọ bụ nke na-adịghị egbu egbu, nke na-adịghị ewe iwe, nwere ezigbo mmiri mmiri, ma nwee njikọ dị mma na ọtụtụ ihe ndị dị ndụ. Ha na ọtụtụ-eji mma ...